MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, 124, 5th Fl., 57th Street, Pazundaung TSP, Yangon, Myanmar စာတိုက်သေတ္တာ (၈၂၅)၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈)
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – အပိုင်း (၄၆) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၇ ● ကောက်ကွတ် ဒုတိယပတ် ကောက်ကွတ်သင်တန်းကျောင်း ဒုတိယပတ်ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဇွန်လမှ သြဂုတ်လအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်၍ အားလုံးပင်ပမ်းကြသည့် သင်တန်းပတ်ဖြစ်သည်။ ထိုဒုတိယပတ်သင်တန်းအားလည်း ဗိုလ်မှူး မရန်ဘရန်တောင်ပင် ဦးစီး လာသည်။ CPB နှင့် ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူကို ဦးစားပေးပုံရသည်။ ဒုတိယပတ်သင်တန်းတွင်လည်း KIA တပ်ရင်း၌လူအင်အား ၃၅၀ ကျော်ခန့်ပါဝင်သည်။ ဒုတိယပတ်သင်တန်းတွင် ကချင် ပညာတတ်လူငယ်များ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုလူငယ်များထဲမှ ဂမ်ရှောင်ဆို သည့်လူငယ်ကို မိမိသတိထားလိုက်မိသည်။ လူပုံခပ်နွဲ့နွဲ့ KIA တပ်ထဲရောက်သည်မှာ မကြာသေး၍ စစ်သားပုံတော့ မထွက်သေးပေ။ ထိုစဉ်က...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ -၆ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ တပ်မတော် နဲ့ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒီ၊ မျုိးချစ်တွေ) ကို ပတ်သက်နေတယ်၊ တပ်မတော်ကို နိုင်ငံတကာနဲ့ဖိနေတယ်၊ လက်မည်းတွေအဖြစ် သံသယတွေရှင်းလင်းသွားအောင် ထိပ်သီးနှစ်ဦးအပေါ် အကြံပြုတင်ပြချက် ၆၂။ လက်ရှိဆောင်းပါးကို အချောသတ်နေစဉ်မှာပင် State Leader ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တပ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့အပေါ် ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်နှစ်ရပ် ထွက်ခဲ့လို့စာရေးသူ အကြပ်ရိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ယခင် အား/ကာ ဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းရဲ့သား ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းတို့ အား နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများနဲ့အတူ ၂၁ပင်လုံ ညီလာခံအပြီး...
မောင်လူရေး – ဖွတ်ဂါရာမ “ဟဟ” အဟော (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ ဖွတ်ဂါရာမသည် ဇမ္ဗူဒိပ် နိမိတ်ပေါ်တဲ့ကျွန်း၏ ဗဟိုချက်မဖြစ်ရကား အတိတ်တဘောင်တို့ဖြင့် အရိပ်ဆောင်လေ့ရှိ၏။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ့အခြေအနေကို သရုပ်ဖော်ရာ၌ အတိတ်တဘောင်စနည်းတို့သည် ဆေးစက်များဖြစ်ချေတော့သည်။ ယင်းဆေးစက်များသည် မှော်ဆန်သော အရုပ်ထင်မှုရှိ၏။ ယခုရောအခါသည် တရံရောအခါနှင့် စနည်းနာပုံ မတူတော့ချေ။ တရံရောအခါက လှေဆိပ် လှည်းဆိပ် ဘုံဆိုင်စသည်တို့၌ ဘယ်သူ ဘယ်လို တွတ်သလဲ စနည်းနာရ၏။ ယခုမှု ခြေတိုအောင် လျှောက်စရာ မလိုတော့ချေ။ ဘေလိုတာ ဖြည့်လိုက်ဖို့သာ။ ကိုယ့်အိပ်ယာပေါ်မှ ဖုန်းကို ပွတ်လိုက်ရုံမျှနှင့်...
ကာတွန်း OKKW ● စောပါသေးတယ် ….
ကာတွန်း OKKW ● စောပါသေးတယ် …. (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း OKKW
ကိုသန်းလွင် ● ကက်တလိုနီးယားနှင့် စပိန် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ (၁) ကက်တလိုနီးယား (Catalonia) သည် စပိန်ကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့မြောက်အစွန်းမှာရှိသည့် နယ်တခုဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာ အပါအ၀င် နယ်ပေါင်းလေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဥရောပကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး အမှတ်စဉ် ၇ နေရာ၌ရှိသည်။ စပိန်နှင့်ပြင်သစ်နှင့်ဖြစ်သော စစ်ပွဲကာလအတွင်း (၁၆၄၀-၁၆၅၂)...
မောင်ကြူးရင့် ● ခံတပ် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ အချစ်ရယ် အခြေအနေက ထိလွယ် ကွဲလွယ် ကြက်ဥတပွေ့နဲ့ လမ်းလျှောက်နေရသလို အချစ်ရယ် လေပြင်းကျတဲ့အခါ ပန်းကလေးတွေ သစ်ရွက်ကလေးတွေ ကြွေသွားနိုင်တယ် အချစ်ရယ် အချစ်က မျက်လုံးလှတယ် နှလုံးသားနူးညံ့တယ် ဘယ်လေပြင်းကမှ ကြွေသွားအောင် မတိုက်ခတ်နိုင်ဘူး အချစ်ရယ် ငါတို့အနက်ဆုံးချောက်ထဲ ကျခဲ့ပြီးပြီ အချစ်ရယ်...
ခွာညို ● အဖေ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ ဒီနေ့ အဖေပျောက်သွားတာ ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဘဝသစ်တခုကို ချက်ခြင်းသာသံသရာပြန်စမယ်ဆိုရင် အခုဆို အဖေက ၁၆ နှစ် တရက်လျော့ဖြစ်နေမှာ ပေ့ါနော်။ ဟိုးအရင်က ကိုင်ဇာသီချင်းတွေကို သမီးတို့နဲ့အတူတူ လိုက်နားထောင်၊ လိုက်ကြိုက်ပေးခဲ့ပြီး သီချင်း စာသား တွေကိုလည်း အဖေက အသေးစိတ်...
မောင်ရင်ငတေ ● ဘလက်ဖောရက်စ်ကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း၊ ဒွိုက်ခ်ျလန်း (သို့မဟုတ်) ဂျာမဏီ ဘလက်ဖောရက်စ်ကို ဖြတ် ကျော်ခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ Schwarzwald (Deutschland) (Photo UMarcus) သတင်းအတင်းအဖျင်းတွေချည်း ဖတ်နေရတာ စိတ်ညစ်ညူး စိတ်ညစ်ညူးရတော့ စကားမပြောချင် စာမရေးချင် စိတ်လက် မပါ ဖြစ်နေသခိုက်မှာ စုဆောင်းထားတဲ့...
ကာတွန်း ဘီရုမာ ● အဲ့ဒါ လက်နက်မှု … ဖမ်း .. ဖမ်း …
ကာတွန်း ဘီရုမာ ● အဲ့ဒါ လက်နက်မှု … ဖမ်း .. ဖမ်း … (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ No tags for this post.
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီအိပ်မက်များ – အပိုင်း (၄၅) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ ● အလွဲများနှင့် မိမိ ပထမပတ်သင်တန်းအပြီး ဒေသခံများကတော့ ခွင့်တောင်းပြီးအိမ်ပြန်ကြသည်။ KIA သင်တန်းဆင်းပြီး နောက်ရက်မှစ၍ အသုတ်လိုက်ခွဲ၍ အိမ်ခွင့်ပြန်ကြသည်။ နောက်တပတ်သင်တန်းကလည်း ပြန်လည်စတင်ရန် ၂ လခန့်လိုသေးသည်ဖြစ်ရာ အများစု အိမ်ပြန်ခွင့်ရကြသည်။ ကျောပိုးအိတ် ကိုယ်စီလွယ်တက်ကြွရွှင်လန်းစွာဖြင့်...
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ – ၅ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ သံသယဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိ်နေကြတဲ့ (အစိုးရ/ တပ်မတော်) ဘက်၂ဘက်ရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေအပေါ် ဖြေရှင်းချက်၊...
Myanmar Now – နေပြည်တော်တွင် လက်နက်များမိ၊ ဒေါ်စုလုံခြုံရေး စိတ်ချရဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ပြော (Myanmar NOW) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ အောင်ငြိမ်းချမ်း/Myanmar Now ရန်ကုန် (Myanmar Now) — နေပြည်တော်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် တရားမဝင် လက်နက်များသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးနှင့် သက်ဆိုင်မည်ဟု မယူဆကြောင်း နေပြည်တော်တိုင်း...
ကိုဖီအာနန် အစီရင်ခံစာ ဖတ်ပြီးကြပြီလား (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ အများပြည်သူတို့ကြား ပြောစရာဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၇ သြဂုတ်လ) ကို စာဖတ်သူတို့ အလွယ်ဖတ်နိုင်ရန် မိုးမခက ကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နုတ်ပြီး မိမိစကားပြောနဲ့ ပြန်လည် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပဏမ သတင်းထတ်ပြန်ချက်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ကူးယူတင်ပြအပ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ...
စံညိမ်းဦး ● နိုင်ငံတော်အဆင့် ငိုချင်း (၁) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ဘယ်လောက်လတ်ဆတ်သီးနှံမဆို ချဉ်ဖတ်အိုးကြီးထဲခုန်ချ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ လောဂျစ် အဲဒီ သမားရိုးကျ လောဂျစ်ကို သံသယဖြစ် အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်ပစ်လိုက်ပါရစေ။ ဒီဝတ္ထု တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီး ဖတ်နေရတဲ့ တအုပ်ထဲသော ဒီဝတ္ထုမှာမှ နောက်ဆုံးအခန်းဟာ စုတ်ဖြဲခံထားရတာတွေ။ အချိန်ရဲ့အလျားဟာ တိမ်တွေအချည်းနှီး သားပေါက်ရုံ...
ဒီလူည ● ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ( ၁ ) ကျနော်ဘာလို့များ ဒီအချိန်ဆို ဒီနေရာကိုမှရွေးထိုင်မိရတာလဲ။ တအိမ်လုံးမှာကျနော်တယောက်တည်း။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လို့ရပေမယ့် ကျနော်ဒီနေရာကိုဘာလို့ရွေးမိသွားလဲမသိဘူး။ များသောအားဖြင့် ကျနော်ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီဆို အလင်းရောင်ကဖျော့လာပြီ။ အမှောင်စဝင်လာတဲ့အနေအထားမျိုး။ ပြီးတော့ အိမ်မှာကျနော်တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါမျိုး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအမှောင်ဝင်စအချိန်မျိုးမှာပဲကျနော်ဟာ ဒီနေရာမှာထိုင်နေမိရက်သားဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီနေရာကနေပြီး ကျနော်ဟာ ဒူးနှစ်ချောင်းကိုလက်ကပိုက်၊...
ကာတွန်း ညီပုချေ ● အလုပ်မရှိ မလုပ်ရှာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
မျိုးတေဇာမောင် ● အစ္စရေးလ်ကဗျာဆရာ ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ဘဝနဲ့ ကဗျာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ အစ္စရေးလ် ကဗျာဆရာကြီး ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ဟာ အစ္စရေးလ် မှာ သာမက နိုင်​ငံတကာ မှာပါ လေးစား အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ မော်ဒန်ကဗျာဆရာကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကဗျာကိုနေ့စဉ်သုံး ဟီးဗရူး ဘာသာစကား...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သြဂဲနစ်သားငါးသီးနှံများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂ဝ၁၇ ● အချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်၊ ဓါတု အရသာနဲ့ မုန့်ဟင်းခါး …. မြန်မာနိုင်ငံက စားအုန်းဆီကို ဓါတုဆေးနဲ့ မြေပဲဆီအနံ့ရအောင်၊ ကြည်လင်နေအောင်လုပ်ပြီး မြေပဲဆီအတုတွေ မဖမ်းဆီး၊ လွှတ်ထားတယ်။ ဖော်မလင် (ကြာရှည်ခံဆေး) တွေကို မုံဟင်း၊ ခေါက်ဆွဲဖတ်၊...
နေထက်နိုင် ● ငါ​ပြောတယ်​ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ဒီကဗျာမှာ ​မေတ္တာပန်း​တွေ ​ဒီ​ခေတ်​ကြီးမှာညှိုးနွမ်း​နေတယ်​ဆိုတာပါတယ်​။ ဒီကဗျာမှာ ​ ကျောင်းနဲ့​ဝေး​နေတဲ့ က​လေး​တွေရဲ့ အနာဂတ်​ပါတယ်​။ ဒီကဗျာမှာ ​ရွှေချထားရမယ့်​ မနက်​​စော​သာယာတဲ့ ငှက်​က​လေး​တွေရဲ့​တေးသံပါတယ်​။ ဒီကဗျာမှာ တိမ်​မည်း​တွေ ​နောက်​ကလိုက်​​နေလို့ လူကြိုက်​နည်းတဲ့လူတ​ယောက်​ရဲ့​ ကောင်းကင်​​ပျောက်​​နေတဲ့ည​နေ​တွေပါတယ်​။ ဒီကဗျာမှာ ကိုယ့်​လူ​တွေအတွက်​ ​ကော်ဖီစစ်​စစ်​တအိုးနဲ့ မန္တ​လေးရမ်​တလုံးပါတယ်​။ ဒီကဗျာမှာ...
ကာတွန်း ATH ● ချင်းပြည်နယ်သို့ ….
ကာတွန်း ATH ● ချင်းပြည်နယ်သို့ …. (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ No tags for this post.
ကျော်ထင် ● ဗီဇယတြထီး (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ (တစ်) ညက မိုးတော်တော်ရွာတာ။ ကတ္တရာလမ်းတလျှောက်လုံး ရေတွေဖွေးလို့။ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှေ့ မှာက ကွင်း ပြင်ကြီးဆိုတော့ ရေပင်လယ်ကို ဖြစ်ရောပဲ။ ဟိုဘက်ဆီ လမ်းကူးဖို့ဆိုတာ လမ်း မဖြတ်ကူးရဘဲနဲ့ ချောင်းကို ဖြတ်ရသလိုပဲ။ ခြေမျက်စေ့အထက်မြုပ်တဲ့ရေတွေဟာ လမ်းမပေါ်မှာ တလဟောစီးနေတယ်။ လမ်းပခုံးသားဘက် ရောက်တော့...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● ဓာတ်ဥလေးကို ဆောင်ထား (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်
လင်းသက်ငြိမ် ● ကျွန်​​တော်​နှင့်​ အ​ရည်​မရ အဖတ်​မရကိစ္စ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ စာအုပ်​ဖတ်​​နေရင်း လည်​​ချောင်းထဲကျသွားတဲ့နှပ်​​ဆေးရည်​​တွေ​ကြောင့်​ ပျို့တက်​လာတယ်​။ အန်​လို့လည်းမထွက်​။ ​ချွေး​စေး​တွေပြန်​လာတယ်​။ ဒီလို အခိုက်​အတံ့​တွေမှာ ကွမ်းယာကို မစား​တော့ဘူးလို့ ခဏခဏဆုံးဖြတ်​​လေ့ရှိ​ပေမယ့်​ ​နောက်​ရက်​​တွေကျ​တော့လည်း ဆက်​စားဖြစ်​တာပါပဲ။ ကျွန်​​တော်​စားတဲ့ကွမ်းယာက ဗမာ​ဆေးပါးပါး နှပ်​​ဆေးရည်​ရွှဲရွှဲနဲ့ အုန်းသီး စိမ်း ထည့်​စားတာပါပဲ။ ကွမ်းယာကို အသက်​နှစ်​ဆယ်​​ကျော်​​လောက်​က​နေ...
စိုးနေလင်း ● ထမ်းပိုးနဲ့ လှည်းထုပ် ကဗျာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ပျော်ဖို့ခက်ခဲလွန်စိတ်နဲ့ နေထွက် နေဝင် နေထိုင်လှုပ်ရှား ပြေးစရာ သွားစရာမြေမရှိ လှည့်မကြည့်ပဲထားပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတော့လည်း ခဲလေသမျှ ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေထဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှုစိုးရိမ်ရေမှတ်ပြ ငါးပွက်ရာ ရှာကြသူတို့ သတင်းလွေ့လွေ့ ဂ ငယ်ကွေ့ ဆိုင်းဘုတ်တို့ချည်းသာ မြွေပူရာ ကင်းမှောင့်နေကြ။ အစမကောင်းပေမယ့် အနှောင်းသေချာလို...
ရာမိုးဇင် ● လေချွန်ပြီး အေးအေးလူလူတင်ဆက်နေတဲ့ ကဗျာအော်ပရာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ လေချွန်သံတွေနဲ့ ဒီကဗျာကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားတယ် အမှောင်အောက်မှာ အမှောက်မှောက်အမှားမှားနဲ့ ရာစုနှစ်ခုစာလွယ်ပိုးထားခဲ့ရတဲ့သန္ဓေသားကို ယမ်းငွေ့တအူအူမှာပွင့်တဲ့ နေကြာပန်းပွင့်လို ပန်းချီကားကင်းဗတ်စတွေပေါ် အဝါရဲရဲ ပွင့်ပြတော့မယ် ဆန်ကြမ်းစားသူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ် မငြိမ်းမချမ်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညစာဟာ အာသာငမ်းငမ်း ငတ်မွတ်လို့ သေနတ်တွေကြည်အသွားတဲ့အထိ ငါတို့ကဗျာတွေရွတ်နေကြမယ် အဝါရောင်သစ်တောလမ်းလေးရှိရာမှာ ငါတို့လေညင်းခံထွက်ကြမယ် တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကဂီတမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့...
ကာတွန်း ညီထွေး ● ရေပေါ်မှာမျှော ပေါလော (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● အကြော်မပါရင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ သိပ်မကြာသေးသော တစ်ခါတုန်းက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု နေသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးသားတစ်ယောက် ရှိသည်။ ရန်ကုန်သားဟု သုံးစွဲကြပါစို့။ တစ်နေ့သော် သူသည် သူအလုပ်လုပ် ရာရုံးသို့ ခါတိုင်းရက်များကဲ့သို့ပင် ပုံမှန်အချိန်တွင်ရောက်၏။ ပြုလုပ်ရန်ရှိသော ကိစ္စအ၀၀တို့ကို အားကြိုးမာန်တက် ပြုလုပ်ပြီးသော်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – New kid on the block (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇ No tags for this post.
ရခိုင်အရေး – နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြည်သူသို့ တင်ပြချက် (မြန်မာနိုင်ငံ အတိုင်ပင်ခံရုံး ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။ ဦးစွာ ပထမ၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားလည်မှု အပြည့်အဝနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး ကျွန်မတို့အစိုးရကို ဝန်းရံပေးတဲ့အတွက်၊ အင်မတန်မှ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ – (၄)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ – (၄) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်ခံစစ်စည်းနဲ့ ရေရှည်ဆွဲထားသင့်သည့် မဟာဗျူဟာစီမံချက် (သို့မဟုတ်)အစိုးရနဲ့တပ်မတော်တို့က ကျောချင်းကပ်ပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြရင်ကောင်းမလဲ ၃၆။ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးခတ်ရာမှာ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေဖမ်းခေါ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက် ARSA အဖွဲ့က ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်သလဲဆိုတာ စုံစမ်း မေးမြန်းပြီး နောက်တခါ...
Page 1 of 85412345...854»
>Prayer Service for Political Prisoners held by Firends and Families
Join 89,294 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month October 2017 (86) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – အပိုင်း (၄၆) https://t.co/jufqilU1ib https://t.co/LaCDMhdKWK about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ -၆ https://t.co/SXkeoKep2X https://t.co/w5ZyrLgMot about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်လူရေး – ဖွတ်ဂါရာမ “ဟဟ” အဟော https://t.co/LCdPCEWZEY https://t.co/NLF0loRipi about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း OKKW ● စောပါသေးတယ် …. https://t.co/LReqbZzwzh https://t.co/Pz3g3gpdW8 about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● ကက်တလိုနီးယားနှင့် စပိန် https://t.co/wlOm1hRm5C https://t.co/kyiApxSIVH about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (61)
ကာတွန်း ATH (195)
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) (46)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (67)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (207)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (941)
Cartoon Box (3,146)
Ba Ba Gyi on ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ – အပိုင်း(၂)
Dr. Maung Maung Gyi on မောင်စွမ်းရည် – ”ကဗျာဆရာကတော်ကြီး ဆေးရုံတက်ခြင်း”
Catwoman on မောင်စွမ်းရည် – ”ကဗျာဆရာကတော်ကြီး ဆေးရုံတက်ခြင်း”
Dr. Maung Maung Gyi on ကာတွန်း ဘီရုမာ – အောက်စဖို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလိုမရှိ
Maung Swan Yi Myanmar Now ကချင် ကမ်လူဝေး ကာတွန်း Joker ကာတွန်း OKKW ကာတွန်း ကိုခေတ် ကာတွန်း ညီပုချေ ကာတွန်း ညီထွေး ကာတွန်း မိုးသွင် ကာတွန်း ဆွေသား ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ခက်ဦး စိုးနေလင်း ဆန်ဖရန် ဇင်လင်း ဇာနီကြီး ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ထင်အောင် ဒီလူည နရီမင်း ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂါလီ မင်းကိုနိုင် မာမာအေး မိုးသွင် ရခိုင် ရခိုင် ရခုိုင် ရိုဟင်ဂျာ လင်းသက်ငြိမ် သွန်းခ အင်တာဗျူး အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ဆောင်းဖြူ မောင်စိုးချိန် မောင်ဥက္ကလာ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) သောင်းပြောင်းထွေလာ ပြည်တွင်းစစ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)